Finalka Koobka kubadda cagta dagmooyinka gobolka banaadir oo Galabta la Ciyaari doono | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Finalka Koobka kubadda cagta dagmooyinka gobolka banaadir oo Galabta la Ciyaari doono
Galabta ayaa lagu wadaa in garoonka Eng.yariisoow ay isku wajahaan ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka kubadda cagta dagmooyinka gobolka banaadir oo ay isagu soo hareen kooxaha dagmooyinka deriska ah ee Cabdi casiis iyo Shangaani.
kooxda kubadda cagta Cabdicasiis waxa ay wareega afar dhamaadka ee ciyaarta kama dambaysta lagu yimaada uga soo adkaatay kooxda dagmada Xamar Jajab oo ay ku kala baxeen rigoorayaal 3-I oo ay ku adkaatay kooxda Cabdicasiis.
Kooxda kubadda cagta ee dagmada Shingaani ayaa u soo baxday tartan dhamaadka kubadda Cagta dagmooyinka gobolka Banaadir 2020 ,kadib Markii ay Gool ku laad uga badisay kooxda kubadda cagta dagmada Dharkeynlay.
Ciyaartaan ayaa waxa xiiso u yeelaya maadaama uu ka dhaxeeyo xafiiltan adag. waxaana la filayaa inay ka qaybgalaan masuuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir dowladda federaalka iyo bahda ciyaaraha dalka.
Sidoo kale Galabta waxaa la filayaa in garoonka ay soo buux dhaafiyaan taageerayaal farabadan maadaama garoonka uu taageerayaasha labada kooxda u sahlanyahay imaatinka.
Maqaal horeBeesha Caalamka oo go’aano ka soo saartay Arrimaha doorashooyinka dalka .
Maqaal XigaCiidamada Dowlada oo burburiyay Goobo Al-shabab ay lacago Baad ah uga qaadi jiraan shacabka KGS